Egwuregwu Social Buzz: Ekekọrịta na Shakekọrịta | Martech Zone
Otu akụkụ dị ukwuu nke ịga ogbako dịka Social Media Marketing World bụ na ị ga-ahapụ nkasi obi nke netwọkụ gị wee banye ọtụtụ ndị ọzọ. Na agbanyeghị nha netwọk gị, ị na-ejikarị ozi na ozi akọwara n'ime. Toga nzukọ mba ụwa dịka nke a ga-emepe gị nye ọtụtụ netwọkụ ọhụụ. Anyị zutere ọtụtụ ndị folks na San Diego ma anyị ga-aga n'ihu na-ede banyere ndị mmadụ na teknụzụ anyị chọpụtara.
Otu teknụzụ dị Club Buzz klọb. Anyị batara klọb ahụ ngwa ngwa wee bụrụ ndị mmekọ, anyị ga-amalite ịrụ ọrụ nso na ndị otu nọ ebe ahụ. Gịnị bụ Social Buzz Club?
N'otu oge, ndị enyi abụọ na ndị ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-ekwu maka otu ha nwere ike isi rụọ ọrụ ma nyere ibe ha aka ịgbasa ozi banyere ndị ahịa ọhụrụ ha. Otu onye nwere onye ahia ohuru ya na ya na aru oru ma choro inweta nkwuputa, onye ozo nke na-aru oru mgbasa ozi ma choro ikpughe iji bawanye onyinye. Ha maara na ndị ahịa na-aba afọ ojuju na ọnụ ọgụgụ nke Fans na-eso ụzọ, ọ bụ ihe niile banyere nloghachi na ego (ROI). Ndị ahịa chọrọ ịhụ obodo ha ka ha na-eme ihe, na-ezipụ okporo ụzọ na weebụsaịtị ha, na-atụgharị ha ndị ahịa ma ọ bụ ndị nyere onyinye.
Ha kwetara na nke a bụ ihe ịma aka ma chee na ọ nwere ike ọ bụghị naanị ha nwere otu nsogbu ahụ. Mgbe ahụ, ha kwuru "gịnị ma ọ bụrụ?" Kedu ihe ma ọ bụrụ na enwere ike ịtọlite ​​netwọ ahịa na mmekorita nke ndị ọkachamara na mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe ịntanetị, yana naanị ebumnuche ịgbasa okwu gbasara azụmaahịa ma ọ bụ ndị ahịa ibe ha n'ụzọ ziri ezi? Nke a ga - eme ka ozi onye ahịa ahụ gbasaa ma mee ka ịkekọrịta ọdịnaya dị mma na ntanetị mgbasa ozi. Gịnị ma ọ bụrụ na e guzobere ya ka ọdịnaya ahụ wee nwee ike ịbụ nke zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ nke obodo, si otú a na-abawanye ọnụọgụ ebumnuche ezubere - mee ka ROI dịkwuo elu maka ndị ahịa ahụ? Ọbụna nke ka mma, gịnị ma ọ bụrụ na ndị otu nwere ike ịkekọrịta ọdịnaya nke aka ha, ma nweta ohere maka onwe ha?
Echiche maka social buzz klọb amuru. Viola! ihe ịga nke ọma site na mmekota!
G WHATN WHAT B THIS A BZ B BZU BZ?
The Club Buzz klọb dozie nsogbu ahụ ma mee ka ndị nwe ọhaneze na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta, ndị ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi, na ndị na-ahụ maka ịre ahịa n'ịntanetị ohere ịghọ ndị na-ewu ụlọ na-ewu ewu site na sistemu nkekọrịta ọdịnaya ụwa mbụ. Ebe obu na iketa oke dabere na nkwenye, onye otu obula na enye mbu. Nke ahụ pụtara ị nweta okwu banyere ụdị dị iche iche n'usoro na netwọkụ nke okike ha bụ ihe mbụ kachasị onye ọ bụla nwere .. N'aka ozo, a ga-akwalite ọdịnaya ndị ahịa gị ka ọ lebara ndị na-ege ntị anya. Ozugbo onye otu natara ihe zuru oke site na ịkekọrịta ọdịnaya ezubere, ya / ya nwere ike tinye ọdịnaya ya ahịa na ọdọ mmiri. Nke a na - achota na onye ọ bụla na - ekekọrịta ọdịnaya yana klọb bụ isi ihe na - eme ka ị nwee ụdị ụdị ị nwere ma ọ bụ ọrụ maka ya.
Ozugbo ịbanye nbanye, ị zutere ndepụta nke ọdịnaya ịkekọrịta na ịmepụta ihe. Ihe m na-enwe obi uto banyere ngwaahịa a bu oke nke nzacha m nwere ike iji na ogo nke ọdịnaya m na-ekerita. Nke a abụghị igwe akpaghị aka nke na-achụpụ ihe ọ bụla na netwọkụ anyị. Enwere m ike ịgụ, idozi na ịkekọrịta ọdịnaya nke m kwenyere na ọ bara ndị na-ege m ntị uru.
Tags: FacebookLinkedInnnyefe-ekere òkèsocial buzz klọbsụọ ngọngọTwitter